नेतृत्वलाई सम्मानसहित परिवर्तन गर्न चाहन्छौं–चन्द्र भण्डारी - Marganugami Daily
Marganugami Daily Interview National नेतृत्वलाई सम्मानसहित परिवर्तन गर्न चाहन्छौं–चन्द्र भण्डारी
नेतृत्वलाई सम्मानसहित परिवर्तन गर्न चाहन्छौं–चन्द्र भण्डारी
संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनमा गुल्मी क्षेत्र नम्बर एकबाट विजयी भएका काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी यस पटकको निर्वाचनमा पुरानै प्रतिद्वन्द्वीसँग पराजित हुन पुगे । अहिले उनले काँग्रेस पराजयका लागि नेतृत्वको कार्यशैली जिम्मेवार रहेको ठान्दै आवाज उठाइरहेका छन् ।
युवा पुस्ताका नेताहरुको संयोजनकारी भूमिकामा देखिएका भण्डारीसहितका नेताले केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमिति बैठकको लागि दबाब दिइरहेको छन् । काँग्रेस पराजय र उनको नेतृत्वमा रहेका युवा समूहको अबको भूमिकाको विषयमा भण्डारीसँग गरेको कुराकानी ।
काँग्रेसको पराजयलाई दलभित्रै बाट दुई दृष्टिकोणले हेरिएको छ, एक पक्ष बामगठबन्धन र अन्तर्घातलाई कारण देखाएका छन् । तपाईंं लगायत कतिपयले त्यसलाई मान्न तयार हुनुहुन्न, किन?
नेपाली काँग्रेसले नेपालको इतिहासमा राष्ट्र र जनतालाई संकट पर्दा निकास दिएको छ । चाहे ००७ रैतिबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्दा होस् । चाहे शसस्त्र दन्द्धले नेपाल आक्रान्त भएको बेला होस् । संविधान नबनेर संविधान चौघेरामा अल्झेको बेला होस वा संविधान कार्यान्वयनको बेला होस् । नेपाली काँग्रेसले एउटा नेतृत्व लिएको छ ।
यति धेरै काम गरेको नेपाली काँग्रेस जसले सबै दललाई सँगै लिएर हिड्ने र सबैलाई मिलाएर संविधान बनाउने पार्टी पछि पर्नुको कारण के हो ? कहाँ चुक्यो ? त्यसपछि हामीले दुई तीननवटा कुराहरु निकाल्यौं । एउटा आन्तरिक संगठन र व्यवस्थापन कमि देखियो । दोश्रो चाहिँ अन्तराष्ट्रिय परिस्थिती पनि नेपाली काँग्रेसले बुझ्न सकेन । तेश्रो चाहिँ आइडोलोजी रिफर्म गर्नुपर्ने देखियो । यी तीनवटा विषयका लागि समय अनुकुल को नेतृत्व पनि आवश्यकता पर्यो ।
वर्तमान नेतृत्वले किन सकेन त ? वर्तमान नेतृत्व आफ्नो जमानामा सीमित भयो । यो नेतृत्वले आफ्नो जवानी पनि दियो । जेल पनि बस्यो । र, अहिले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा भूमिका पनि खेल्यो । नगरेको होइन । तर, वर्तमानमा जन्मिएका नयाँ चुनौति, नयाँ विचारलाई नेतृत्व दिने कुरामा कमजोरी देखियो । दार्शनिक रुपमा नेपालमा लेफ्ट फोर्स पनि छ । कम्युनिष्टहरु दुनियाँमा असफल हुने तर, नेपालमा सफल भएकोले केही कमजोरी त छ । यसमा नेतृत्वको कमजोरी देखियो । यो कुनै व्यक्ति प्रति वा कुनै समुहप्रति लक्षित होईन । यो हाम्रो विश्लेषण हो । हामी हार्यौँ नि । त्यसकारण हारेको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्यो ।
तपाईंंहरु निर्वाचनको समीक्षाका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमिति बैठकको माग गरेको छ । तर, सभापति देउवाले उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने भनेको छ । कुरा त मिलने ?
उनी एक असल नेता हो । संविधानको कार्यान्वयनदेखि संकटबाट निकाल्ने काम शेरबहादुर देउवाले गरेको छ । उनको विश्लेषण र चिन्तनलाई दोष छैन । उनको उमेर पनि भयो नि । त्यसकारण उनले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले विश्वमा विशेष गरि दुई तीन विषय चर्चामा छन् । एउटा कन्जरभेटिभ नेस्नालिज्म भनिन्छ । हामी ग्लोबल भिलेजको कुरा गरिरहेका छौँ । देशबाट वाहिर गएपछि युवाहरु सुपरनेस्नालिस्ट हुन्छन् । त्यसलाई हामीले सम्वोधन गर्न सकेनौँ । अर्को कुरा नाकाबन्दी गरेको बेलामा सबै नागरिकको पक्षबाट हामी भिड्न सकेनौँ । आफनो संगठन सुदृढ गर्न सकेनौँ । यो कुरा आसेपासेमा लागेका व्यक्तिले गर्न सक्दैनन् । समानुपातिक प्रणाली ल्याइएको छ । तर, समान न्याय गर्न सकिएन । एउटै व्यक्तिलाई दुई ÷ तिन पटक अवसर दिने कार्य भए । सबैभन्दा बढि महिला हारे । ती महिलाहरुलाई हामीले समान अधिकार दिन सकेनौँ । यी विभिन्न कारणले हामी हारेका हौँ । हारलाई अन्तर्घातले भन्ने कुरा गर्न पाइएन ।
काँग्रेसको पराजयलाई उनीहरु ले डाइग्नोसिस गर्न सकिएन । उन डाइग्नोसिस गर्नसक्ने सर्जन होईन । उनको समयमा चुनौती फरक थिए । अहिले चुनौती फरक छन् । सरकार चाहिएर सरकार बनाए पछि पपुलिष्ट बजेट ल्याउनुपर्दैन ? यहि निरन्तरता बोक्नका लागि उनी किन चाहियो त ? एक जमनामा उनीहरु एक राम्रो डाक्टर हुन्थ्यो । तर, उनहरुले बुझ्नुपर्छ कि नयाँ डाक्टरहरु आए । नयाँ रोगहरु आए । नयाँ रोगको निदानका लागि नयाँ डाक्टरको आवश्यकता पर्दछ । अहिलेको रोगहरुबारे उनीहरुको पढाईं नै होइन । त्यसकारण अप्रेससन गर्नसक्दैन ।
समानुपातिक एमालेको हारहारी मत आएको भन्दै देउवा सन्तुष्ट देखिनुभएको छ । आफु हार्ने, दोष मलाइ दिने भन्दै देउवा तपाईं हरु प्रती नै खनिनुभएको छ ?
उनको बोलीमा करेक्सन हुन्छ । समानुुपातीकमा बढि ल्याएका छौं भन्ने त खुत्रे कुरा हुन् । त्यो आत्मरती हो । बामगठबन्धनले नेपाली काँग्रेस हारेको म मान्न तयार छैन । पहिलो संविधानमा माओवादी पहिलो दल भयो । दोश्रोमा नेपाली काँग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । अहिले काँग्रेस फेरि तल परेको छ । यो संयोग हो । विचार र दृष्टिकोणले गर्ने हो । इमान्दारशिलताले गर्ने हो । पारदर्शितताले गर्ने हो । यसमा अल्झिनु फेरि पनि पराजित भयो । यहि विश्लेषणमा अल्झिने हो भने त एक प्रकारको विरामीलाई फरक औषधी चलाउनु हो । त्यसले रोग अझ बल्झिन्छ ।
तपाईं निर्वाचन समीक्षाका लागि युवाहरुलाई संयोजन गर्दै दबाब दिदै आउनुभएको छ । तर नेतृत्वले सुनेको देखिदैन नि ?
विधान अनुसार चल्नुपर्यो । विधानमा काँग्रेसको बैठक बस्नुपर्छ । वर्षको एक पटक महासमितिको बैठक बस्नुपर्छ । विधानमा समयमा महाधिवेसन गर्नुपर्छ भनिएको छ । प्रजातन्त्रिक संस्कारमा देखाउनुपर्छ । ढिला सुस्ती गरेको देखिन्छ । ढिला सुस्ती गरे उनीहरु आफै कोल्याप्स् हुन्छ । उनीहरुको सामाजिक इज्जत नै सकिन्छ । त्यसकारण हामीले भनेका विषयहरु सुन्ने नसुन्ने होइन, प्रणाली राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो । आचरणको विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो । वा आफ्नो सर्कल भन्दा बाहिर निस्कने ननिस्कने भन्ने हो । केही वरपर घुम्ने मुसा प्रवृत्तीका व्यक्तिले सल्लाह दिएका होलान् । जो चुनाव पनि लड्नु नपर्ने समानुपातिक खानेहरु हुन् । त्यसले देश र पार्टी बन्दैन । नेतृत्वलाई जिवन्त राख्न सक्दैन ।
पछिल्लो समय युवा पुस्ताले सभापतिलाई दबाब बढाँउदै लगेपछि भातृ संगठनमा देउवा नजिक रहेकाहरुले सभापतिको बचाउ गर्दै आउनुभएको छ । के भन्नुहुन्छ?
त्यति धेरै उनी कमजोर हुन । उनलाई संरक्षणको आवश्यकता नै छैन । उनी सुरक्षित हुनका लागि कसैलाई उचाल्नु पनि पर्दैन । हामी नेतृत्वलाई सम्मान सहित परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ । सम्मान नै गरेर नयाँ डाइग्नोसिस गर्न चाहन्छौँ । उनको दृष्टिकोण र हाम्रो दृष्टिकोण अलि फरक छ ।
सामान्यतया निर्वाचनमा हार वा जित पछि समीक्षाका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइन्छ । नेपाली काँग्रेसको किन हुन सकेन?
हामीले सम्मान गरेका नेता पावरले गर्दा यति दम्भ हुन्छन् भन्ने लागेको थिएन । त्यसकारण दम्भताको उपलब्धी हो यो । अरु केही होइन ।
तपाईंले संयोजन गरेको युवा नेताहरुको समुहले अब के गर्छ ?
भर्खरका चुनौती छन् । दोश्रो कुरा संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि छ । हामीले संविधान कार्यान्वयनको साथसाथै कम्युनिष्ट गैर जिम्मेवार भए भने के गर्ने अर्को कार्य छ । ३४ वर्षको ज्योती वसुको कम्युनिष्ट शासन गयो । युरोपमा कम्युनिष्ट कोल्याप्स् नै भए । विकास गरे भने त राम्रो भयो । गरेनन् भने ?
विश्वको इतिहासमा कम्युनिष्ट जिम्मेवार भएको देखिएको छैन । एमाले पनि हिंसाबाट जन्मेको हो । माओवादी पनि हिंसाबाट आएको हो । केपीले ओलीले वीपीलाई राम्रो भने । वीपीलाई पाठशाला भन्नेहरुलाई सिकाउन सकेपनि काँग्रेसको लागि राम्रो हुन्छ । कसैलाई चेक गर्न पनि केही त चाहियो । त्यसकारण हामीले यो अभियान चलाएका हौँ । ।आफु पनि सुूिने ,अरुलाई पनि सुधार्ने हो । देशप्रतिको आशा र भरोसा पनि जगाउने र प्रतिपक्षमा बसेर गलत काम गर्न नदिने लक्ष्यका लागि हामीले यो अभियान शुरु गरेको हौं ।
बामगठबन्धनप्रति तपाईंको बुझाई के छ ? स्थिर सरकारको एजेण्डा लिएर निर्वाचनमा गए अनुसार देशले स्थिरता र विकास पाउने देख्नुहुन्छ ?
हरेक राम्रो मान्छे जिनबाट आउने हो । पहिले एक अर्कामा अत्यन्तै दुश्मनी गरेको बेला हो । प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ओलीलाई उपचारको लागि राँची लानुपर्छ भनेकै हो । ओलीले प्रचण्डलाई भारतीय दलाल र लम्पसारवादी भनेका हुन् ।
यो गठबन्धन टिकाउ भयो भने त राम्रो भयो । टिकाउ भएन भने त नेपाल अन्यौलमा पर्छ नि । गरिबका छोराछोरी अरबै जानुपर्ने हुन्छ । कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री त भए तर संविधान बनेन । उनीहरुको बोली र व्यवहारले हुँदैन । स्थिर हुनुपर्छ । उनीहरुले रोपेको जरा खराब छ । उनीहरुको असफलतामा हाम्रो सफलता देख्दैन । पछिल्ला गतिविधिले बाम गठबन्धनले स्थिर सरकार बनाउने देखिन्न । उनीहरुको सर्कलमा करप्ट व्यक्ति छन् । एनजिओ चलाएर बसेका व्यक्ति छन् । प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्दछ । बैमनस्यता बढाउँदैन ।
तपाईं अघिल्लो पटक जित्नु भएको, अहिले त्यही स्थानमा पराजित हुनुभयो । हारमा वामगठबन्धन, अन्तर्घात वा आफ्नै कारण मान्नहुन्छ ?
मैलै आफ्नो क्षेत्रमा धेरै कामहरु गरेको छु । ४२ वटा त पुल बन्दैछ । ७३ वटा सडक बनिरहेका छन् । ९३ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । सिंचाईको काम भएको छ । सिद्धबाबाको वैकल्पिक सडक हामीले बनाउँदै छौँ । एसियामा नभएको नमुना पुल बनेको छ । यो काम मैले संसदमा बोल्नका लागि पनि गरेको हँु । चाह्यौँ भने के गर्न सकिदैन भन्नका लागि पनि हो । नमुना जिल्ला बनाउन खोजेको थिएँ ।
एमालेसँग १५ हजार माओवादी केन्द्रको र तीन हजार जनमोर्चाका मत भयो । त्यसकारण हामीले पराजय भोग्न पर्यो । सबैले दिन्छन् भन्ने पनि त होइन नि । अब गुल्मी तीस वर्ष पछि पर्यो । मैले आफ्नो तलब पनि लिएको होइन । रातोपाटी बाट ससभार